ढिंँडो पसलबाट दुई लाखसम्म आम्दानी गर्दै, ढिडोको लाइनमा सिडियोदेखि मन्त्रीसम्म ! – Nepali Audio Video
ढिंँडो पसलबाट दुई लाखसम्म आम्दानी गर्दै, ढिडोको लाइनमा सिडियोदेखि मन्त्रीसम्म !
पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत मकवानपुरको हेटौँंडास्थित राप्ती खोला पुलको मुखमै छ सुदामा पुडाशैनीको ढिंँडो पसल छ । राप्ती किनारको सिमलटार गाउँमा उहाँले ढिंँडो बेच्न थालेको झण्डै ६ वर्षभयो ।
हेटौँडा उपमहानगरपालिका–१ राप्ती खोलाको किनारमै छ ढिंँडो पसल । ऐलानी एक कठ्ठा जग्गामा ६ वर्षदेखि पुडाशैनीले ढिँडो बनाएर बेच्दै आउनुभएको छ । उहाँले गाडी चलाउन छाडेर ढिंँडो बेच्न थाल्नुभएको हो । साउदी गएर दुई वर्ष गाडी चलाएको पनि उहाँसँग अनुभव छ । “परिवासँग बसेर पेशा गर्न पाइएको छ, आम्दानी पनि राम्रै छ,” उहाँले भन्नुभयो ।